Maraykanka oo danjire cusub oo soo magcaabay safaaradiisa Soomaaliya xili la bedelay James Swan – Radio Daljir
Agoosto 15, 2013 2:48 b 0
Nairobi, August 15, 2013 – Xukuumada Washington ayaa safiir u cusub oo soo xil-saartay dalka Soomaaliya, kaasi oo si rasmi ah shaqada ula wareegay haatan, sidaasi waxaa lagu shaaciyey war-saxaafadeed ka soo baxay Maraykanka.
James P. McAnulty ayaa laga dhigay safiirka cusub ee Maraykanka u qaabilsan Soomaaliya kaasi oo sii wadi doona howlihii safaarada, danjiraha cusub wuxuu la wareegay shaqada maalinimadii shalayto.
Wakiilka cusub ee Maraykanka u qaabilsan Soomaaliya ayaa bedelaya safiirkii hore ee James Swan oo shaqada safiirnimo hayey ilaa August 2011, wakhtigaasi oo uu la wareegay shaqada safaarada Maraykanka u qaabilsan Soomaaliya.
War-saxaafadeed ka soo baxay Maraykanka ayaa lagu shaaciyey safiirka cusub James P. McAnulty, warka Maraykanka waxaa lagu sheegay in safiirka cusub oo yahay diblumaasi ka soo shaqeeyey meelo badan oo Maraykanku ku leeyahay safaarado, kuwaasi oo ku teedsan caalamka.
Mr. McAnutly ayaa wuxuu haystaa abaal-marino kala duwan oo ay siisay waaxda arimaha debeda ee Maraykanka, isagoo ku mutuystay shaqadii uu ka qabtay qeybta arimaha qaxootiga ee safaarada Maraykanku ku leeyahay Nairobi.
Dowladda Maraykanka waxay ku sheegtay war-saxaafadeed in safiirka looga fadhiyo howlo badan oo u taala safaarada Maraykanka ee Soomaaliya, wuxuuna sii wadi doonaa howlaha USA ee taageerada iyo garab istaagida ah ee dalka Soomaaliya.